Football Khabar » बार्सिलोना भर्सेस लेभान्टे : फाती चम्किँदा पहिलो हाफमा बार्सिलोना २–० ले अघि !
बार्सिलोना भर्सेस लेभान्टे : फाती चम्किँदा पहिलो हाफमा बार्सिलोना २–० ले अघि !
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा अहिले बार्सिलोना र लेभान्टेको खेल जारी छ । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा जारी खेलको पहिलो हाफमा घरेलु टालीले २–० को सहज अग्रता लिएको छ । सुरुआती केही मिनेट औसत अवस्थामा देखिएको बार्सिलोनाका लागि २ वटै गोल युवा स्टार अन्सु फातीले गरे भने उनका दुवै गोलमा कप्तान लिओनल मेस्सीले असिस्ट गरे ।
बार्सिलोनाका लागि खेलको ३०औं मिनेटमा फातीले पहिलो गोल गरे । मेस्सीको पासमा उनले वान भर्सेस वानको अवस्थामा सुन्दर गोल गरेका थिए । लगत्तै अर्को मिनेटमा फातीले दोस्रो गोल गरे । मैदानको माथिल्लो भागमा मेस्सीले चलाखीपूर्वक दिएको पास सदुपयोग गर्दै फातीले हानेको सट लेभान्टेका गोलकिपरलाई लाग्दै छिरेपछि बार्सिलोनाले पहिलो हाफमा २–० को अग्रता बनायो ।
प्रकाशित मिति २० माघ २०७६, सोमबार ०२:३०